Kate Middleton: mashruucan lama filaanka ah ee ay tahay inay ku farxaan taageerayaasheeda - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Kate Middleton: mashruucan lama filaanka ah ee ku farxi lahaa taageerayaasheeda
Joogitaanka Kate Middleton ee warbaahinta ayaa xaqiijineysa dhagaystayaal wanaagsan. Laga bilaabo halkaas ilaa ka faa iidee guul oo u dhiib show show TV ah? Tani waxay u fiicnaan laheyd xubin ka mid ah qoyska boqortooyada, waana fikrad ka farxineysa taageerayaasha. Waxa xantaasi xanbaarsan tahay wareysi u dhaxeeyay Duchess of Cambridge iyo Tony Hall, maamulaha guud ee telefishanka Ingiriiska ee BBC, oo ku yaal London Khamiista Noofembar 7 media, sida la sharxay The Mirror.
Labadan nin ma wada hadleen a mashruuca telefishanka waayo, boqoradda boqoradda mustaqbalka? Farshaxanka Kensington, kaas oo cayiman taas Kate Middleton wuxuu tegay BBC HQ isagoo ah gabadh ka tirsan Boqortooyada Sucuudiga, kiis kasta wuu diiday inuu ka hadlo wararkan la isla dhexmarayo ee ah saxaafadda Ingiriiska. Sheeko la mid ah dhinaca silsiladda, oo aan xukumin "Waxay ku habboon tahay in la shaaciyo faahfaahinta ballantan". Qarsoodigu wali waa uu ahaanayaa mid ilaa hadda socda ...
Warar xan ah ayaa ku jira xaalad kasta oo ay taageerayaan diyaarinta uu soddoga u yahay amiir Harry oo taxane ah oo loogu magac daray Apple TV + oo uu ku jiro mid ka mid ah tirooyinka telefishanka Mareykanka Oprah Winfrey, oo ah saaxiibkii jilaagii hore. taxane Dacwadaha Meghan Markle. Qoyska boqortooyada, mustaqbalka xiddigo cusub oo shaashadda yar ah !
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/royautes/kate-middleton-ce-projet-inattendu-qui-devrait-ravir-ses-fans-1047003
Dadka: Jilaaga Ruby, Diane Audrey Ngako waxay difaacaan ifafaalaha Shakiro, canvas wuxuu shidan karaa